ရန်ကုန်စည်ပင် ရွေးကောက်ပွဲဝင် ပါတီဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ပါတီကြီးနှစ်ခုစလုံးမှ ငေ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်စည်ပင် ရွေးကောက်ပွဲဝင် ပါတီဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ပါတီကြီးနှစ်ခုစလုံးမှ ငေ?
ရန်ကုန်စည်ပင် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်ပါတီဝင်ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများကို ငွေကြေးထောက် ပံ့ပေးခြင်းမရှိကြောင်း ပါတီကြီးနှစ်ခုထံမှသိရသည်။ ရန်ကုန်စည်ပင်ရွေးကောက် ပွဲအဆင့်ဆင့်နေရာများအတွက် ပါတီကြီးနှစ်ခုဖြစ်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ပြည် ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတို့မှ ပါတီဝင်များ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ပါတီဝင်များစည်ပင်ရွေး ကောက်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစရိတ်ကို ပါတီအနေဖြင့်ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်သော်လည်းပါတီအမှတ်အ သားကို အသုံးပြုခွင့်နှင့်ပါတီဝင်ကို မဲထည့်ရန်စည်းရုံးပေးခြင်းတို့ကို ပါတီဝင်များကလုပ်ဆောင်နေကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ပြောသည်။
”ပါတီဝင်ထဲက စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ဝင်ရောက် ရွေးချယ်ခံမယ့်သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရမှာပါ။ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမရှိပါ ဘူး။ ကျန်တဲ့ပါတီဝင်တွေက မဲထည့်ပေးဖို့စည်းရုံးပေးတာတော့ရှိပါတယ်။ ပါတီ Logo အသုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုကတော့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရွေးချယ်မယ့် စည်ပင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာပါ”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ မတ် ၃၁ ရက်တွင်ကျင်းပမည့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရွေးကောက်ပွဲ၌ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ၉၁ ဦး၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ၂၃ ဦးနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ၁၆ဝ တို့ဝင်ရောက် အရွေးချယ်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ သိရသည်။
စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲအဆင့်ဆင့်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ပါတီ Logo အသုံးပြုခွင့်ပြု၊ မပြု ပါတီအကြီးအကဲများထံမှ သဘောထားမခံယူရသေးကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးသိန်းထွန်းဦးက ပြောသည်။ ”ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမပေးပါဘူး။ သူတို့မဲရအောင် ကျွန်တော်တို့ ပါတီဝင်တွေကိုမဲပေးခိုင်းတာပေါ့။ ကိုယ့်ပါတီတွင်းက ကိုယ်စားလှယ် လောင်းကို မဲပေးဖို့ နီးစပ်ရာပြောကြတာပေါ့”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင်နှင့်မြို့နယ်ဆင့်များအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဆိုပြုလျှောက်လွှာတင်သူ ၂၇၇ ဦး ရှိခဲ့သည့်အနက်နှစ်ဦးမှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ သတ်မှတ်အရည် အချင်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသဖြင့် ပယ်ခဲ့ပြီး ယှဉ်ပြိုင်လိုခြင်းမရှိ၍ နုတ် ထွက်သူတစ်ဦးရှိခဲ့သဖြင့် ၂၇၄ ဦးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိသည်။ ယင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၂၇၄ ဦး၏အမည်စာရင်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
World Hearing Day 2019 ကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကျင်းပ၊ မြန်မာအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် အကြားအာရုံခ?
မြန်မာအမျိုးသမီးများ တရုတ်နိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးခံရမှု မြင့်တက်နေဆဲဖြစ်၊ လူကုန်ကူးမှုများက??
တောင်သူလယ်သမား အရေး လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသူနှစ်ဦးကို ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေငြိစွန်းသည် ဟုဆိုကာ နယ